Global Voices teny Malagasy » Japàna : miteraka ahiahy ilay fanapahankevitra hamarina any an-dranomasina ireo rano voapoizina avy ao amin’ilay toby famokarana herinaratra nisy fahasimbàna tao Fukushima · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Marsa 2021 12:14 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika (fr) i Laetitia Galy, avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Siansa, Voina
Mpiasa miasa eny afovoan'ireo sinibe ambanin'ny tany misy ireo rano voaloto, ao amin'ilay foibe nokleary famokarana herinaratra ao Fukushima-Daiichi, ny 17 aprily 2013. Tsinjo ery aoriana ireo karazana sinibe roa fanangonana ety ivelan'ny tany. Sary an'i Greg Web, nalaina tao amin'ny Flickr ofisialin'ny Masoivoho Iraisampirenena Misahana ny Angovo Atômika (AIEA)  ary nasiana fanovàna ny refiny niandohana, nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0. 
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mitondra mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.]
Tamin'ny tapaky ny Oktôbra dia nambaran'ny governamanta japoney ny eritreriny hanary any an-dranomasina ireo rano voaloton'ny akora misy taratra mahafaty. Rano avy amin'ny loza nokleary nitranga tao Fukushima io, ary niteraka ahiahy goavana avy amin'izao tontolo izao ilay fanapahankevitra.
Ny 16 Oktôbra, namoaka  lahatsoratra iray ny masoivohom-baovao japoney Kyodo, nilazany ny fahavononan'ny governemanta japoney hankato ny fandraràhana any an-dranomasina ireo rano feno singa misy taratra mahafaty, efa ho iray tapitrisa taonina, avy ao amin'ny toby nokleary ao Fukushima-Daiichi.
Hita ao anatin'io rano io ny Karbôna 14 amin'ny taha avo dia avo, singa iray misy taratra mahafaty afaka hanimba ny tahirin-tarazon'ny olombelona (ADN) , araka ny tatitra  iray avy amin'ny Greenpeace nivoaka taorian'io fanambaràna io. Manoloana ireo ahiahy mifamatotra amin'ny ho fiantraikan'ny fihetsika tahaka io amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamàna, notsipihan'ireo manampahaizana sasany ny fahasarotana, eny fa ny mety tsy ho fahafahana mihitsy aza, haminavina ny tena loza raha tsy fantatra amin'ny antsipirihany ny fikasan'ny governemanta.
Ao Fukushima, ny sehatry ny jono, potika  raha ny lafiny toekarena no itarafana azy, dia mandà izay rehetra tetikasa fanariana any an-dranomasina, satria mety hanapoizina ny trondro izany. Korea Atsimo mpifanolo-bodirindrina aminy koa dia naneho « ahiahy fatratra ». Any an-dafin'ny ranomasimbe Pasifika, ao amin'ny nosy Vancouver (ao Kanadà), 7.300 km eo ho eo miala amin'i Fukushima, nanaitra ny mponina ilay vaovao :
Toa mivonona ny governemanta japoney handraraka any an-dranomasina rano an-tapitrisa taonina misy taratra, avy ao amin'ny foibe nokleary famokarana herinaratra ao Fukushima. #yyj #fahalotoana #nokleary #taratramahafaty
Ny foibe nokleary famokarana herinaratra ao Fukushima-Daiichi (250 km eo ho eo any avaratr'i Tokyo), ao amin'ny morontsirak'i Pasifika amin'ny ilany misy an'i Japàna, no toerana nitrangan'ny loza nokleary ratsy indrindra teto amin'izao tontolo izao  taorian'ny tany Chernobyl (1986), noho ny fisian'ilay horohorontany nandravarava niteraka onja mahery vaika (tsunami), tamin'ny 11 martsa 2011 . Telo tamin'ireo vondrom-pihary efatra tao  [fr] amin'ilay toerana famokarana no potika tamin'ilay loza, nitarika nankany amin'ny fitetevan'ireo akora misy taratra mahafaty ka nandoto ireo vondrom-piarahamonina teo amin'ny manodidina ary nanery vahoaka marobe nonina tao an-toerana hiatrika famindran-toerana faobe.
Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 1,25 tapitrisa taonina  [jn] eo ny rano voaloto misy taratra mahafaty mitoby ao amin'ilay toerana misy ny toby famokarana herinaratra noravàna ao Fukushima-Daiichi. Isanandro, 170 taonina  ny rano averina atsofoka ho fanpangatsiahana ireo vondrom-pihary herinaratra, miteraka fivangongoana singa marobe misy taratra tena mampididoza ho an'ny fahasalaman'ny olombelona. Ilay rano voaloto dia avy amin'ny fifangaroan'ny rano nampiasaina ho fampangatsiahana an'ireo vondrom-pihary herinaratra miisa telo sy ny ranon'orana na ireo mikoriana any ambanin'ny tany ka miditra any anatin'ireo tranobe misy ireo vondrom-pihary herinaratra sy torbina, ary ireo fitaovana simba nandritra ilay horohorontany namely ny morontsirak'i Pasifika tany akaikin'i Tōhoku, tamin'ny 11 martsa 2011.
Ireo rano tsy voapoizina, avy amin'ireo rano ambanin'ny tany, amin'ny faritra ambonin'ny misy ilay foibe famokarana herinaratra, dia notrohana mankany an-dranomasina, raha ireo rano voapozina avy amin'ilay toby nokleary kosa tehirizina anaty sinibe goavana mirantiranty amin'izao fotoana izao ao amin'ilay faritra midadasika ao Fukushima. Ny fanamby tena goavana indrindra atrehan'ny governemanta japoney sy ny oriasam-panjakana misahana ny famatsiana herinaratra, tompon'ireo fotodrafitrasa ao Fukushima, dia ny hisorohana ny tsy hivarinan'io rano voapoizina io any an-dranomasina.
Tamin'ny Febroary 2020, ny tatitry ny  [pdf] iraka iray nalefan'ny governemanta no nampitaha sy nandalina vahaolana marobe mety ho azo eritreretina hanariana ireny rano voapoizina avy ao amin'ny tobin'i Fukushima ireny. Hita tao anatin'ireo vahaolana naroso ny hoe :
fampidirana ny rano voapoizina ho any anatin'ireo firafitra jeolojika (地層注入 ) ao ambanin'ilay foibe noklearin'i Fukushima ;
Fampientonana ireo rano natoby, hahafahana mamotika ireo singa mitondra pozina ;
Fandetehana ireo rano ho any ambanin'ny tany, anaty barika be na sinibe hafa.
Anatin'io antontan-kevitra io, naravon'ilay kaomity fa hoe ny fandefasana ny rano ho an'ny an-dranomasina no vahaolana mora vidy indrindra sy azo tanterahana raha ny lafiny teknika no jerena. Nifototra tamin'ireny torohevitra ireny, nodinihan'ny  governemanta japoney tamin'ny 2020 ny mety hahafahana manary rano iray tapitrisa taonina, raha kely indrindra, any an-dranomasina. Kanefa, tsy mbola navoaka ho fantatry ny maro ny antsipirihany momba ny toerana na ny fomba handrarahana ilay rano.
Ireo sinibe miaty rano voapoizina, manoloana ireo tranobe misy ny vondrom-pihary herinaratra, ao amin'ny toby nokleary ao Fukushima-Daiichi. Sary an'i Susanna Loof / AIEA , nampiasàna lisansa CC BY 2.0. 
« Tsy mbola navoaka foana ny fomba nomanina handrarahana ireo singa misy taratra ireo any an-dranomasina », hoy i Jay Cullen  nandritra ny antsafa iray natao ho an'ny Global Voices. « Araraka avy eny amin'ny morontsiraka ve ny rano? Hotrohana dia avy eo indray ho asitrika any amin'ny fanambanin'ny ranomasina ve? Ireo sambo mpitatitra solika ve no hitatitra? Tsy azo antoka akory aza hoe ara-dalàna sa tsia ny fihetsika toy izany raha dinihana ny Fifanarahana tany Londona momba ny fanariana fako any an-dranomasina ». Simista mpahay momba ny an-dranomasia i Jay Cullen, mpahay momba ny ranomasimbe ary profesora ao amin'ny fakiolten'ny Siansan'ny Tany sy ny Ranomasina ao amin'ny Oniversite-n'i Victoria, ao amin'ny nosy Vancouver.
Ho azy, mety hisy mpitondra taratra mahafaty ao anatin'ilay rano, indrindra fa ny césium, cobalt, carbone 14 ary ny tritium. Tena faran'izay manahirana  ny manadio rano voapoizina tamin'ireny singa ireny, hoy i Cullen. Samy mampidi-doza fatratra ho an'ny fahasalaman'ny olombelona izy telo ireo. Fa kosa, sarotra vinavinaina ny haavon'ny loza mitatao satria miankina amina singa marobe izay, na tsy fantatra, na tazonina ho tsiambaratelo ao amin'ny governemanta japoney sy ny orinasam-panjakana misahana ny famatsiana herinaratra nampiandraiketina ny fanesorana ireo poizina.
« Izany dia mitovy ihany amin'ny miteny hoe ratsy ho an'ny fahasalamana ny firaka, nefa tsy fantatra akory ny fatran'ny firaka nokirakiraina sy nifampikasohana», hoy i Cullen. Mba hahafahana maminavina tsara ny loza mitatao, hazavain'ilay mpikaroka fa tsy maintsy manontany tena momba « ny fatran'ireo singa halefa handoto ny tontolo iainana, ny ho fiantraikan'izy ireny amin'ny tontolo iainana, ary izay karazan'ilay singa mitondra taratra mahafaty tsy maintsy hifampikasohan'ny olombelona».
Tao amin'ny Twitter, nanipika ihany koa i Cullen fa ny asa nataon'ny olombelona tany aloha tany dia tomponandraikitra amin'ny fahalotoana, noho ireo singa mitondra taratra mahafaty nahatratra fatra ambony be, ary mbola hita hatramin'izao ao anatin'ny tontolo iainana. Toy izany no zavamisy amin'ireo fanaovana andrana nokleary :
3) Raha ampitahaina amin'ny fatra (8 000 PBq) hita mazàna anaty ranomasina vokatr'ireo andrana nokleary natao nandritra ny taonjato lasa iny dia kely ny fatran'ny tritium mitoby ao anatin'ireo sinibe ao #Fukushima (1 PBq).
Araka ny lazain'i Cullen, etsy andaniny dia ny marimaritra iraisana amin'ny fanatobiana ao amin'ilay toerana sy ny fandrarahana tsy voafehy an'ilay rano no resaka, ary etsy ankilany ny fandrarahana voafehy.
« Manana fahelam-piainana 12 taona ny tritium », hoy ny fanazavan'i Cullen. Mihena miaraka amin'ny fotoana ny loza mitatao entiny, saingy « tsy maintsy tombanana mifanaraka amin'ny mety ho tsy fahatombombanana tsy ampoizina mitranga amin'ireo fanatobiana azy, nefa koa mifanaraka amin'izay loza mitatao mety ho entin'izay horohorontany goavana ahiana hitarika fahavakisana sy fiparitahana tsy voafehy ».
Hatreto, zara raha misy ny torohay momba ireo singa mitondra taratra mahafaty natoby any anatin'ireo sinibe, sy ny loza mitatao mety haterany ho an'ny tontolo iainana ary ny fahasalaman'ny olombelona, izay mametraka fanamby iray hafa goavana amin'ny fanombanana ireo loza mitatao mifamatotra amin'ny fandrarahana any an-dranomasina an'ilay rano misy singa mitondra taratra mahafaty.
6) Mba hananana tombana tsy misy tomika momba ireo loza mitatao mifamatotra amin'ny fandrarahana any an-dranomasina ny rano miaty singa mandefa taratra mahafaty, tsy maintsy koa raisina anaty kajikajy ireo singa hafa mpitondra taratra efa ao anatin'io rano io, indrindra fa ny stronium 90 (90Sr) sy ny césium 137 (137Cs), izay manana fahelàna velona lavabe ao anatin'ny tontolo iainana ary mety hiangona any anatin'ireo kasinga madinika mananaina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/03/151681/
 Flickr ofisialin'ny Masoivoho Iraisampirenena Misahana ny Angovo Atômika (AIEA): https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/8656859377/
 CC BY 2.0. : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
 hanimba ny tahirin-tarazon'ny olombelona (ADN): https://www.theguardian.com/world/2020/oct/23/fukushima-reactor-water-could-damage-human-dna-if-released-says-greenpeace?CMP=Share_iOSApp_Other
 ahiahy fatratra : https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/29/national/s-korea-expresses-serious-concern-radioactive-water-dump/
 loza nokleary ratsy indrindra teto amin'izao tontolo izao: https://globalvoices.org/2015/03/20/japanese-power-utility-finally-admits-fukushima-meltdown/
 horohorontany nandravarava niteraka onja mahery vaika (tsunami), tamin'ny 11 martsa 2011: https://globalvoices.org/specialcoverage/2011-special-coverage/japan-earthquake-tsunami-2011/#featured
 Telo tamin'ireo vondrom-pihary efatra tao: https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima_Daiichi
 1,25 tapitrisa taonina: https://news.yahoo.co.jp/byline/kinoryuichi/20200322-00168991/
 170 taonina: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/16/national/fukushima-treated-water-sea/
 Febroary 2020, ny tatitry ny: https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/pdf/20200210_alps.pdf
 Fifanarahana tany Londona momba ny fanariana fako any an-dranomasina : https://www.gc.noaa.gov/gcil_mp_ocean_dumping.html
 faran'izay manahirana: https://science.sciencemag.org/content/369/6504/621